cele Archives - Barnyar Barnyar
မင်းသမီးငယ်ဘဝမှာ အစော်ကား ခံခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ ရီစီးဝစ်သာစပွန်
မင်းသမီးငယ်ဘဝမှာ အစော်ကား ခံခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ ရီစီးဝစ်သာစပွန် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ထုတ်လုပ်သူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ရီစီးဝစ်သာစပွန်က လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာ့ကြေးအကြီးဆုံး မင်းသမီး တစ်လက် အဖြစ် ရပ်တည် နေသူပါ ။ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဖိုဘီ မဂ္ဂဇင်း တွေမှာ ကမ္ဘာ့ သြဇာအရှိဆုံး ၁၀၀မှာ […]
စတိုင်ရှိလို့ စတားဖြစ်နေကြတာပါ…. ဘောလီးဝုဒ်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းနဲ့ ပေါက်ဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါအပြင် တလ်ဂူးတွေ ရိုက်တဲ့ ဟင်ဒီဇာတ်ကားတွေက ဇာတ်အိမ် ခိုင်လွန်းတာကြောင့် ဘောလီးဝုဒ် ထဲကို တောလီးဝုဒ်က တိုးဝင်လာတော့ တော်ရုံလောက်နဲ့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လောကကို ထိုးဖောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ […]
April 21, 2022 linn htet 0
Zawgyi ဖွငျ့ ဖတျရနျ – (၃) ရက်သား ယောက်ျားလေး ရင်ချင်းဆက် အမွှာလေးတွေ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် တာဝန်ယူပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို သူမရဲ့ရင်သွေးလေးတွေသဖွယ် ကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ချီးကျူးလေးစားဖွယ် မင်းသမီးတယောက်ပါ။ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ် ခေါ်ယူ […]
သူတို့မေမေ လာတွေ့လို့ ပျော်နေကြတာများကွယ် ချစ်စရာကလေးတို့ရယ်….
နေပြည်တော် တိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်မှာ အသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ရဲ့ ဝက်ဝံလေးများ သူတို့မေမေ လာတွေ့လို့ ပျော်နေကြတာများကွယ် ချစ်စရာကလေးတို့ရယ်…. ဦးအောင်ရဲ့ ကျန်ရှိသော ဝက်ဝံလေးတွေဖြစ်တဲ့ မမမိကောင်း၊ အငယ်လေး အုအဲ၊ သားပြာလချောင်နဲ့ ချစ်ချစ်တို့ကို နေပြည်တော် တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ ပို့ဆောင် လှူဒါန်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ဦးအောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ […]
ဝီလ်စမစ် ကို အော်စကာဘုတ်အဖွဲ့ က ပွဲတက်ခွင့် ၁၀နှစ်ပိတ်
April 10, 2022 linn htet 0
ဝီလျစမဈ ကို အျောစကာဘုတျအဖှဲ့ က ပှဲတကျခှငျ့ ၁၀နှဈပိတျ မောငျယဿ ပွီးခဲ့တဲ့ အကယျဒမီဆုပေးပှဲမှာ အစီအစဉျတငျဆကျသူ ဟာသသရုပျဆောငျ ခရစ်စရော့ချ ပါးရိုကျခံရပွီးနောကျ စငျပျေါတကျပွီး ပါးရိုကျခဲ့တဲ့ ဝီလျစမဈကို အျောစကာဆု သို့မဟုတျ အခွားသော အကယျဒမီပှဲသို့ တကျရောကျခွငျးအား ၁၀ နှဈပိတျ လိုကျပါတယျ။ Smith […]
April 8, 2022 linn htet 0
ဘဝကို လိုချင်တာစုပ်ယူထားတဲ့ ရေမြုပ်တစ်ခုလိုပဲ နေလိုက်ပါတယ် မောင်ယဿ ဆယ်လီနာဂိုမက်ဇ် ဆိုတာ ငယ်ငယ်နဲ့ ကျော်ကြားမှုတွေ ချမ်းသာမှုတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆယ်လီ တစ်ယောက်ပါ။ ဒစ္စနေ ရဲ့ တီဗီ စီရီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ wizards of waverly place” မှာ […]
Onlineမှာ ဖငျတပွပွနဲ့ ဓာတျပုံတငျတဲ့ ပြိုပြိုမမြေား
Onlineမှာ ဖငျတပွပွနဲ့ ဓာတျပုံတငျတဲ့ ပြိုပြိုမမြေား အရငျက Online မှာ ဖငျတပွပွနဲ့ ဓာတျပုံတငျတဲ့ မျောဒယျယောငျယောငျတှေ မျောမဒယျ တဒယျတှေ တှရေ့ငျ အံသွမိတယျ… ဘာကွောငျ့လညျဆိုတော ဒီမိနျးမတှေ နစေ့ဉျရကျဆကျ ဒီဖငျကွီးပဲ ဘာလို့ ပွပွနလေညျးပေါ့ အဒါဘာကွောငျလညျး ။ တဈခါတလဆေို ဖငျအတုလား အစဈလား […]
အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကို ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား ဝယ်လ် စမစ်သ်
အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကို ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား ဝယ်လ် စမစ်သ် မတ်လ ၂၇ ရက်ညက အမေရိကန်မှာ ကျင်းပတဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် ဝယ်လ် စမစ်သ်က အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ခရစ် ရော့ခ်ကို စင်ပေါ်တက်ပြီး ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်က ဒီဆုပေးပွဲအတွင်း လူတွေ အဓိက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ […]
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပုရိသအားလုံးကို ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့မော်ဒယ် ချောကလျာ ..
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပုရိသအားလုံးကို ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့မော်ဒယ် ချောကလျာ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း […]
အမျိုးသားထုကြားမှာ အကျီတောင် မဝတ်နိုင်အောင် ရောင်းနေရတဲ့အဖြစ် ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အရသာလဲရှိမဲ့ မျက်စိအစာလဲ ကျွေးနိုင်မယ့် မမအလန်းဇယားတွေရဲ့ လမ်းဘေး ဈေးရောင်းချမှုကြီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသားတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးလျက် ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ Nong Mukda ဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ လမ်းဘေးအကင်ဆိုင် ဖွင့်ထားပီး၊ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားမှာရော၊ သူမရောင်းတဲ့ […]
Hits Today : 9100
Total Hits : 318808